Uppdaterades 3 jun 2021 15:36
Kooxaha khatarta ugu jira
Waxaad bogga internetka ee Folkhälsomyndighetens ku yaala macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa kor u sii qaadaaya khatarta inuu covid-19 kugu xumaado.. (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Socialstyrelsen ayaa sidoo kale leh liisto kooxaha khatarta ugu jira ku dhigan yihiin halkaas oo ay sidoo kale ku jiraan noocyada cuduradan soo socda.
Cudurka Schizofreni (cudur dhimirka oo uu qofku gooni u takoormo)
Cudurka bipolär (cudurka Bipolär waa cudur dhimirka oo uu qofku marna waalan/kacsan yahay marna niyadjabsan yahay)
Talaalka iyo uurka
Haweenka uurka leh ayaa tallaalka covid-19 la siin karraa markay wajiga/xilliga afaraad ee uurka ku jiraan, taas oo ah da' la mid ah ta shakhsiyaadka kale. Haweenka uurka leh ee kooxaha khatarta ku jira ka mid ah ayaa covid-19 lagaga tallaali karaa tallaalka mRNA inta lagu jiro wajiga 3. Tallaalada mRNA ga ah ee loo isticmaalo dadka da'doodu ka hooseyso 65 jirka ayaa loo ansaxiyey in la siiyo dumarka uurka leh dhamaan intay uurka leeyihiin. Dumarka uurka leh ee aan lahayn cudur kale oo u hooseeya ayaa tallaalka loo soo jeedinayaa todobaadka 12-aad ee uurka.
Wax dheeraad ah ka akhriso cunsurka halista ee keeni kara khatar sii kordheysa oo uu covid-19 xuni kuugu dhacaayo Folkhälsomyndighetens webbplats. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)